Ruushku wuxuu si guul leh u tijaabiyay diyaarad weyn oo rakaab ah oo ka dambeysay Soofiyeedka Ruushka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Ruushku wuxuu si guul leh u tijaabiyay diyaarad weyn oo rakaab ah oo ka dambeysay Soofiyeedka Ruushka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Wararka Ruushka • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Wadooyinka tijaabada ayaa si qaas ah loo soo xushay sababtoo ah qoyaan badan iyo heerkul hoose oo laga helay halkaas, taas oo horseedaysa sameynta baraf dusha sare ee diyaaradaha
Tijaabooyinka diyaaradaha waxaa lagu sameeyay xaalad qabow
Diyaaraddu waxay 14 duulimaad ku samaysay xeebta Badda Cad, qayb ka mid ah Barents Sea iyo aagga Subpolar Urals
Irkut wuxuu si guul leh u duulayay diyaaradda MC-21 muddo ka badan saddex sano
Masuuliyiinta duulista rayidka ee Ruushka ayaa tijaabiyey tijaabadii ugu horeysay ee diyaarad rakaab maxalli ah oo ka dambeysay Soofiyeedka ka dib Ruushka, MC-21-300.
Tijaabooyinka waxaa lagu sameeyay xaalad qabow si loo fiiriyo sida ay diyaaradu u shaqeyso marka lagu daboolo barafka. Diyaaraddu waxay si guul leh u dhammaystirtay tijaabooyinkii shahaadiga ahaa iyadoo lagu gudajiray xaalado dabiici ah oo waqooyiga Ruushka ah waxayna si badbaado leh ugu duuli kartaa xaaladaha qallafsan, soo saaraha Shirkadda Irkut, oo qayb ka ah Shirkadda Diyaaradaha Diyaaradaha ee UAC (UAC), ayaa shaaca laga qaaday horraantii toddobaadkan.
Diyaaraddu waxay samaysay 14 duulimaad oo socday muddo saddex ilaa shan saacadood ah oo ay ku mareysay xeebta Badda Cad, qayb ka mid ah Barents Sea iyo aagga Subpolar Ural. Wadooyinka ayaa si gaar ah loo qaaday sababtoo ah huurka badan iyo heerkulka hooseeya ee halkaas laga helay, taas oo horseedaysa sameynta baraf dusha sare ee diyaaradaha.
Duulimaadyada shahaadada waxaa lagu qaaday dhowr tallaabo. Marka hore, shaqaaluhu waxay raadiyeen daruuro abuuri lahaa xaaladaha loo baahan yahay. Qalab gaar ah oo lagu rakibay diyaaradda, oo ay ku jiraan 12 kaamirooyin, ayaa markaa u oggolaaday inay xakameeyaan inta dusha sare ee diyaaradda uu ku daboolay baraf isla markaana duubay sida ay u shaqeyneysay. Ka dib markii lakabka barafku uu qaro weynaa, dayuuraddu waxay heshay joog sare si ay u hubiso waxqabadkeeda xaaladahaas jira.
Dhumucda barafka ayaa la kordhiyay duulimaad kasta oo tijaabo ah, ugu dambeyntiina wuxuu gaadhay siddeed sintimitir - in ka badan oo ku filan in la sheego in diyaaradda ay si guul leh uga gudubtay imtixaanka. Marka loo eego heerarka Ruushka iyo Yurub, diyaaraddu waa inaysan luminin astaamaha loogu talagalay iyadoo daboolay lakab baraf ah 7.6 cm (3 inji) qaro weyn.
Markuu dhammeystiray duulimaadyada shahaadada, MC-21-300 wuxuu kasoo laabtay Arkhangelsk wuxuuna ku laabtay garoonka diyaaradaha Zhukovsky ee u dhow Moscow.
Irkut wuxuu si guul leh u duulayay diyaaradda MC-21 muddo ka badan seddex sano, laakiin awood la'aanta inay la soo wareegto qaybo Mareykanku sameeyay oo diyaaradda ah ayaa ku qasabtay shirkadda inay ka fekeraan siyaabo ay isugu dayaan inay ku horumariyaan diyaaradda iyagoo adeegsanaya waxyaabo badan oo gudaha ah. Nooc ka mid ah diyaaradaha MC-21, oo loo yaqaan MC-21-310 dayuurad, oo ay ku rakiban yihiin laba matoor oo Ruush ah PD-14 ayaa duulimaadkeedii ugu horreeyay sameeyay dhammaadkii sanadkii hore.